Zinedine Zidane Oo Shaaciyey Qorshihiisa Mustaqbalka &
Tababaraha Real Madrid, Zinedine Zidane ayaa shaaciyey inuu si degdeg ah hawlgab uga noqon doono tababarenimada kubadda cagta, taas oo uu sheegay inay tahay mid culays badan.
Zidane oo ay da’diisu tahay 48 jir, waxa uu mar horeba iska casilay tababarenimada Real Madrid oo uu hayay laba sannadood iyo badh, laakiin dib ayaa loogu soo celiyey markii ay fashilmeen Solari iyo Lopetegui oo muddo gaaban isku beddelay, waxaanu xili ciyaareedkan u dhow yahay inuu ku guuleysto koobkiisii labaad ee LaLiga ah iyagoo laba dhibcood ka horreeya Barcelona xilli lix ciyaarood hadhsan yihiin.
Tababare Zidane oo kooxdiisu ay 1-0 kaga soo adkaatay Espanyol si ay hoggaanka u dheeraystaan, waxa uu tilmaamay in shaqada tababarenimada uu kaga fadhiisan doono wax ka yar 20 sannadood, taas oo ka dhigan in inta aanay da’diisu gaadhin 60 jir uu joojin doono.
“Tababare ma ahaanayo 20 sannadood. Waxaan ka fadhiisan doonaa waqtigaas ka hor” ayuu yidhi Zidane oo intaa ku daray: “Anigu waxaan ahay tababare aan caadi ahayn, wax walbaana way dhici karayaan. Waxba ma qorshaynayo, kaliya waxa ixiise geliya shaqada maalinlaha ah. Inta ay socon karto, ma garan karayo.”
Markii uu ciyaartoyga ahaa, Zidane waxa uu sheegay in aanu ku fikiri jirin inuu tababare noqdo, waxaanu yidhi: “Markii aan ciyaartoyga ahaa, waxaan garoomada ku jiray 18 ama 19 sannadood, marka ay dadku i weydiiyaan haddii aan tababare noqonayana, waxaan ku odhan jiray maya.
“Kaddib waxaan go’aansaday inaan noqdo. Tani run ahaantii way ku xidh-xidhaysaa, kumana sii jiri doono 20 sannadood, taas ayaa hubaal ah.”
Shaqada tababarenimada heerka koowaad waxa uu bilaabay sannadkii 2016 oo uu Real Madrid ka beddelay Rafa Bentiez oo waqtigaas shaqada laga caydhiyey, waxaana uu Zidane dunida kaga yaabsaday saddex Champions League oo xidhiidh ah oo uu ku guuleystay, horyaalka LaLiga oo uu ku darsaday iyo koobabkiisa oo isu-geyn noqday 10.